The City of Violence (2006) | MM Movie Store
ဆိုးလျမွို့ရာဇဝတျမှုနှိမျနှငျးရေးအဖှဲ့မှ ထယျဆိုး တဈယောကျသူငယျခငျြးဟောငျးဖွဈသူ ဝမျးဂယျြရဲ့စြာပနာပှဲကိုတကျရောကျဖို့အတှကျ မှေးရပျမွကေိုပွနျလာခဲ့ပါတယျ။ သူပွနျလာလို့ သူငယျခငျြးရဲ့ ဈပနပှဲမှာ မသာမှုတှေ တှခေဲ့ရတယျ။
သူငယျခငျြးဖွဈသူဝမျးဂယျြရဲ့သဆေုံးမှုဟာ သံသယဖွဈစရာကောငျးတဲ့အတှကျ ဆော့ဟှမျးနဲ့ထယျဆိုးတို့ဟာ သူ့နညျးသူ့ဟနျနဲ့စုံစမျးရေးကိုစတငျခဲ့ပါတော့တယျ။ အဲ့ဒီမှာပဲသဆေုံးမှုဟာ ထယျဆိုးမမြှျောလငျ့ထားတဲ့သူတှနေဲ့ဆကျနှယျနတောကို တှခေဲ့ရတယျ…ထယျဆိုးတဈယောကျဘယျလိုအခကျအခဲတှရေငျဆိုငျရမလဲ…
သူမထငျထားတဲ့သူတှဆေိုတာကရော ဘယျသူတှမြေားဖွဈမလဲ…ဒီကားက အကျရှငျဦးစားပေးဇာတျကားတဈကားပါ…. ဇာတျလမျးကကောငျးသလို အကျရှငျကားကွိုကျသူတှအေတှကျ
ကနြေပျလောကျအောငျ အကျရှငျခနျးတှေ မြားစှာပါဝငျပါတယျ…ခံစားကွညျ့ကွပါဦး..
ဆိုးလ်မြို့ရာဇဝတ်မှုနှိမ်နှင်းရေးအဖွဲ့မှ ထယ်ဆိုး တစ်ယောက်သူငယ်ချင်းဟောင်းဖြစ်သူ ဝမ်းဂျယ်ရဲ့ဈာပနာပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက် မွေးရပ်မြေကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ သူပြန်လာလို့ သူငယ်ချင်းရဲ့ ဈပနပွဲမှာ မသာမှုတွေ တွေ့ခဲ့ရတယ်။
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူဝမ်းဂျယ်ရဲ့သေဆုံးမှုဟာ သံသယဖြစ်စရာကောင်းတဲ့အတွက် ဆော့ဟွမ်းနဲ့ထယ်ဆိုးတို့ဟာ သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့စုံစမ်းရေးကိုစတင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီမှာပဲသေဆုံးမှုဟာ ထယ်ဆိုးမမျှော်လင့်ထားတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်…ထယ်ဆိုးတစ်ယောက်ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရမလဲ…
သူမထင်ထားတဲ့သူတွေဆိုတာကရော ဘယ်သူတွေများဖြစ်မလဲ…ဒီကားက အက်ရှင်ဦးစားပေးဇာတ်ကားတစ်ကားပါ…. ဇာတ်လမ်းကကောင်းသလို အက်ရှင်ကားကြိုက်သူတွေအတွက်
ကျေနပ်လောက်အောင် အက်ရှင်ခန်းတွေ များစွာပါဝင်ပါတယ်…ခံစားကြည့်ကြပါဦး..